Etazonia: 15 Oktobra Teny An-dalambe Sy Tany Anaty Tambajotra Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2011 18:31 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, македонски, srpski, বাংলা, Español
Tsy tsiambaratelo ho an'ny rehetra intsony ny hoe Facebook, Twitter sy YouTube, ankoatra ireo tambajotra sosialy hafa, dianitàna anjara toerana fototra tamin'ireo hetsika tato ho ato tao an-toerana sy manerana izao tontolo izao. Tamin'ny 2009, izao tontolo izao dia nahita ny antsipirihan'ny onja “maitso” tao Teheran avy amin'ireo sehatra ireo, ary nitranga ny toy izay tao amin'ny Kianja Tahrir tao Kairo sy ny “indignados” tao Madrid. Araka ny efa nampoizintsika, ny hetsika manerantany 15 Oktobra 2011, koa dia nampiasa betsaka ireny tambajotra ireny.
Ny 15 Oktobra dia nahitàna fitosahana tenifototra tsy ankiato tao amin'ny Twitter, isan'ireny ny #ocuppyWallStreet, #OWS, #globalday, #15oct, #Oct15, ary #occupyeverywhere, ankoatry ny mar hafa, iantsoana ireo rehetra maniry ny mba hanatevin-daharana. Tamin'ny fotoana izay nibodoan'ny hetsika ny kianjan'ny Times Square, an'hetsiny ireo olona nampiasa ny smartphone teny aminy mba handefasana bitsika na handraketana ny zavatra rehetra niseho, ary tsy nivoana tamin'izany ny Global Voices, araka izay asehon'ity lahatsary manaraka ity:
Tsy navelan'ireo bilaogera handalo fotsiny ity zavatra ity. Jennifer Preston avy amin'ny Media Decoder dia maneho ampahan-dahatsary avy amin'ireo hetsika eran-tany ary manome tarehimarika mombany fampiasana ny tambajotra mitaha amin'ireo fihetsiketsehana:
Ny fifanakalozan-dresaka eo anivon'ny aterineto mikasika ny Occupy Wall Street dia tsy nitsahatra nitombo teny anivon'ny sehatra fampitam-baovaoa sosialy tato anatin'ny herinandro vitsy sady nihanaka teny amin'ireo mpampiasa izany any ivelany tamin'ny herinandro lasa arakaraky ny nanakaikezan'ilay hetsika manerantany. Araka ny Trendrr, orinasa iray mandalina ny media sosialy, niakatra ambonin'ny 25 isan-jato amin'ny fitambarambeny ny isan'ireo lahatsoratra any ivelan'i Etazonia miresaka momba ny Occupy Wall Street ao amin'ny Twittertamin'ny Zoma, ambonin'ny 15 isan-jato nandritra ny fotoana mitovy aminy tamin'ny herinandro talohan'io.
(Azafady, vakio eto sy eto ny tantara misimisy kokoa avy amin'ny Global Voices momba ny Occupy Wall Street)
Tsy hoe teny an-tany malalaka sy teny an-jaridaina ihany no nisy ny hetsika, fa koa tany anaty aterineto. Misy bilaogy iray antsoina hoe “We are the 99 Percent”, na ” Izahay no 99 isan-jato” izay mamoaka sarin'olona mitàna soratra misy antsipirihany momba ny olana ara-toekarenan-dry zareo. Ny bilaogy Democracy in America (Demaokrasia ao Amerika) dia tsy mihevitra ity bilaogy ity ho mendri-piderana fotsiny, fa koa mandrefy ny fahasamihafana misy amin'ny Facebook sy Twitter raha ny resaka fiantraikan'ny hafatra entiny:
Tsy midika zavatra inona akory ny hamaroan'ny mpankafy ao amin'ny Facebook, raha toa ianao afaka mirotsaka ho izany nefa avy eo manadino izany tanteraka. Tsaratsara kokoa ny Tweets, satria izy ireny dia manome antsika hoe firy ny olona tena taitra amin'ny hetsika iray amin'ny fotoana hitrangàny. Saingy ny fahatsiarovantena fotsiny no soritan'izy ireny, fa tsy ny fanohanana. Ary sarotra ny hamoaka ny tena firehana ankapobeny nandritra ireo andro teo aloha noho ny olona nikisaka niala tamin'ny tenifototra #occupywallst ho amin'ny fohifohy kokoa #ows
Ary toy izao no fomba nanangonanay ny tatitra tao amin'ny Twitter mikasika ny hetsika 15 Oktobra. DC Debbie (@DCDebbie) dia nampiasa ny tenifototra #ows mba hanazavàna hoe maninona no toa sahala amin'ny manohitra ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpamoaka vaovao Amerikana iray.
Fox News dia mitady hamaritra ireo vahoaka be ao amin'ny #ows ho toy ny tsy manan-kaleha, tsy ampy fahalalàna. Izany no antony tsy andefasan-dry zareo VELIVELY an'ity lahatsary ity: http://www.observer.com/2011/10/exclusive-occupy-wall-street-activist-slams-fox-news-anchor-in-un-aired-interview-video/
Fotoana vitsy lasa izay, nanambara ny Filoha Barack Obama, tao amin'ny fanokanana ny takela-pahatsiarovana an'i Martin Luther King Jr. Takela-pahatsiarovana, fa hoe ity mpitarika nodimandry ity dia mety ho nanohana ny hetsika 15 Oktobra raha mbola velona teo. Na izany aza, Liza Sabater (@blogdiva) manontany hoe:
mety ho nanao izany tokoa va re izy? #ows RT @thaiparampil: Obama: MLK Jr. Mety Ho Nanohana Ny Occupy Wall Street | PolitikaTenaMangarahara http://is.gd
Ny bitsika avy amin'i Harakahdaily (@hdaily09) dia ohatra iray amin'ny fomba nampiasàna ny tambajotra sosialy aminà tantara an-dalam-pivoarana:
Mitohy manerana ny tany ny hetsika Occupy Wall Street satria 175 no voasambotra tao Etazonia: LONDON, 17 Okt : Nalaina tahaka avy amin'ny Occupy Wall… http://dlvr.it/qzsdz
Ireto manaraka ireto ny sary avy amin'ny hetsika 17 Oktobra tao an-tanànan'i New York, izay natao teo amin'ny Zaridaina Zuccotti hatrany amin'ny kianja Times Square:
Fifandonana sasantsasany teo amin'ny mpampihatra lalàna sy ny mpanao gazety tao amin'ny Times Square. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Polisy miezaka mifehy ny fivezivezen'ireo mpandeha an-tongotra. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Nitangorona tao afovoan'ny kianja Times Square ireo mpanao fihetsiketsehana. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Tsy niato ny fitanjozotry ny hetsika na teny an-toerana azany polisy. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Sorabaventy ahitana ny isa "15" entina milaza ireo hetsi-panoherana 15 Oktobra. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Sorabaventy milaza hoe "Ento mody ny voalanay nalefa any an'ady". Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Arakaraky ny fivoaran'ny hetsika no nampitombo koa ny fifanenjanana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Mpanao fihetsiketsehana nandalo teo anoloan'ny Nasdaq tao amin'ny Times Square. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Mandritra izany, ny sasany tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana OccupyWall Street dia nipetraka tao amin'ny Zaridaina Zuccotti. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Vehivavy naka endrika "zombies" nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Na ny ankizy aza dia nanatevin-daharana ny hetsika. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Tao an-jaridaina Zucotti, fantatra koa ankehitriny amin'ny hoe Kianjan'ny Fahalalahana, no napetraka ny toeram-pidiovana sy foibe famatsiana sakafo. Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Mpanao fihetsiketsehana misalotra saron-tava miendrika ondry ary sora-baventy mivaky hoe "Ry Ondry Eran-tany, Mifohaza". Sary avy amin'i Robert Valencia ho an'ny Global Voices, 2011
Ny sary nasongadina avy amin'ny hetsika Occupy tao an-kianjan'ny Times Square dia avy amin'i Stephanie Keith, copyright Demotix (15/10/11).